सिन्धुपाल्चोकमा तेस्रो दल ‘बदर’! :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
सिन्धुपाल्चोकमा तेस्रो दल ‘बदर’!
विजय नेपाल सिन्धुपाल्चोक मंसिर २६
सिन्धुपाल्चोकको प्रत्यक्ष तर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा बदर मतको संख्याले तेस्रो स्थान ओगटेको छ। प्रत्यक्षतर्फको मतगणना गर्दा बामपन्धी र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको मत पछि तेस्रो स्थानमा बदर मतको संख्या रहेको हो ।
सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. २ को कुल १ लाख १२ हजार १९६ मतदाता मध्ये ७७ हजार ९३८ मत मात्रै झरेको थियो। सो मत गन्दा ७१ हजार ८३४ मत मात्रै सदर भएर छ। ६ हजार १०४ मत बदर भएको छ । सो क्षेत्रमा नेकपा एमालेका शेरबहादुर तामाङले ३८ हजार ४०१ मत ल्याए। ३० हजार ३६९ मत ल्याएर राप्रपा प्रजातान्त्रिकका पशुपति शम्शेर जबरा पराजित भए। सो क्षेत्रमा तेस्रो हुने राप्रपा राष्ट्रवादीको १ हजार ३४१ मत मात्रै पाएका कारण बदर मत उनले पाएको मत भन्दा बढी देखिएको हो।
सो क्षेत्रमा नेकपामालेका वीर बहादुर तामाङले १ हजार २७९ मत, विवेकशील साझा पार्टीका जयराम भण्डारीको १५३ मत, नयाँ शक्तिका विदुर प्रसाल चौलागाँईको १३० मत रहेको छ।
सोहि प्रतिनिधि सभाको प्रदेश १ र २ मा पनि बदर मत नै तेस्रो भएको छ। १३ हजार ५२१ मत ल्याएका कांग्रेसका विकास लामालाई २० हजार ६८७ मत ल्याएका माओवादी केन्द्रका युवराज दुलालले पराजित गर्दा तेस्रो हुने जन समाजवादी पार्टी नेपालका काली बहादुर माझीको ८९२ मत भन्दा बदर मतको संख्या नै बढी छ।
कुल ३७ हजार २१३ मत खसेको सो प्रदेश सभामा ३५ हजार ३८७ मत मात्रै सदर भएर १ हजार ८ सय २६ मत बदर भयो। कुल ६ जना उम्मेद्वार भएको सो क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार दइन्द्रबहादुर ठकुरीको १६४ मत भन्दा कम मत नयाँ शक्ति पार्टीका चेत बहादुर तामाङ ८१ मत र तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टीका आशिक तामाङले ४२ मत मात्रै ल्याएका छन्।
प्रतिनिधि २ कै प्रदेश ख मा पनि जम्मा १९७ मतान्तरले विजयी भएका काँग्रेसका निमा लामा १८ हजार ९०५ र माओवादी केन्द्रका दावा तामाङको १८ हजार ७०८ मत पछि एक हजार ७८६ बदर मत नै तेस्रो क्रममा छ। सो क्षेत्रमा जनसमाजबादी पार्टी नेपालका चेतनाथ गिरी ले ७४६, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका कृष्ण बहादुर तामाङले १३४ मत, नयाँ शक्ति पार्टीका भरत अधिकारीले १२६ मत पाएका थिए।
प्रतिनिधि सभा १ मा पनि बदर मत नै तेस्रो हैसियतमा छ । कुल खसेको ७८ हजार ६९६ मतमध्ये ७३ हजार २४८ मत सदर हुँदा पाँच हजार ४४८ मत बदर भएको छ । सो क्षेत्रमा विजयी हुने माओवादी केन्द्रका अग्नि प्रसाद सापकोटको ४० हजार ५०४ मत छ भने काँग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेतको २९ हजार ७९८ मत छ । बदर मतभन्दा पछाडि भने १ हजार ७०२ मत सहित जनसमाजवादी पार्टीका हस्तबहादुर विश्वकर्मा छन् । सो क्षेत्रमा संघीय समाजवादी फोरमका जगत बहादुर तामाङले २८३ मत, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दिर्गबहादु सुवेदीले २४८ मत पाएका थिए।
प्रतिनिधि सभा २ को प्रदेश १ मा पनि नेकपा एमालेका अरुण नेपालले २१ हजार ७१२ मत ल्याउदै १४ हजार ६३३ मत ल्याउने कांग्रेसका विष्णुबहादु खत्रीलाई पराजीत गर्दा बदर मत संख्या २ हजार २ सय ३१ छ । सो प्रदेशमा एक सय मत कटाउने अर्का एक उम्मेद्वार संघीय समाजवादी फोरमका चिना लामा १६७ मत मात्रै हुन्। स्वतन्त्र एक सहीत अन्य दलका सात उम्मेद्वारले एक सय मत पुर्‍याउन सकेनन्।
प्रदेश सभा २ मा पनि १२ हजार १८७ मत ल्याएका काँग्रेसका राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई २२ हजार ८३७ मत ल्याउलै नेकपा एमालेका सरेश नेपालले जित हाँसिल गर्दा बदर मत २ हजार ३१५ छ । त्यसपछि जनसमाजवादी पार्टी नेपालका बुद्ध कुमार श्रेष्ठले ८२५ मत ल्याएका थिए।
सिन्धुपाल्चोकमा प्रतिनिधि सभा तर्फ कुल १ लाख ५६ हजार ६३४ मत खस्दा एक लाख ४५ हजार ८२ मत मात्रै सदर भयो। ११ हजार ५५२ मत बदर भयो। प्रदेश सभा तर्फ भने कुल आठ हजार १५८ मत बदर भयो।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २६, २०७४, ०२:४६:५९